दुर्गममा बिरलै हुने जटिल शल्यक्रिया बयालपाटा अस्पतालमा सम्पन्न « Sudoor Aaja
३० भाद्र २०७७, मंगलवार २०:५५
दुर्गममा बिरलै हुने जटिल शल्यक्रिया बयालपाटा अस्पतालमा सम्पन्न
सुदूर आज ३० भाद्र २०७७, मंगलवार २०:५५
– डा. विकास गौचन
यो दशकको समयमा मैले बिभिन्न समयमा जटिल प्रकारका शल्यक्रियाको थुप्रै पटक सामना गर्नु परेको छ । त्यो प्रक्रिया एक चिकित्सक भएको नाताले बिरामीको ज्यान बचाउनमा मेरो प्रण सधैँ भईरहेको छ । यसै अन्र्तगत भाद्र २९ सोमबार राती बयालपाता अस्पतालमा दुर्गम जिल्ला बाजुराको त्रिबेणी नगरपालिकाको बिकट गाउकालीबाताकि २५ बर्षीय महिला पेट दुख्ने समस्या लिएर आईन् ।
तीन छोराछोरीकी आमा उनलाई स्वास्थ्य जांचको लागी बाजुरा जिल्लाको जिल्ला अस्पताल मार्तडी लगिएको रहेछ । त्यहाँ उनको शारीरिक जांच भएपछि ठुलो अस्पतालजानको लागी प्रेषण गरिएको रहेछ । बयालपाटा अस्पतालमा डा. विप्लव श्रेष्ठ डिउटीमा हुनु हुन्थ्यो, ऊहाले पनि जांच गरेपछि पेट भित्र रगत जमेको र त्यसको कारण पाठ्यघर बाहिर बसेको गर्भ फुटेको भन्ने निस्कर्षमा पुग्नु भयो र उहाँले मलाई शल्यक्रियाको लागी परामर्श माग्नु भयो । पाठ्यघर बाहिर बसेको गर्भ जब फुट्छ, धेरै रगत बगेमा र समयमा उपचार नपाएमा महिलाको मृत्यू हुन सक्छ । यसरी हुने मृत्यू पनि मातृ मृत्यूको धेरै कारण मध्ये एक हो ।
हामीले उहालाई जाचगर्दा गम्भीर रोग देखापर्यो । यो सानो उमेरमा शरीरमा एक दमकम रगत थियो । हामीले त्यसको कारण पत्ता लगाउन कोशिस गर्यौ । भिडियो एक्सरे गर्दा उहाको पेटमा धेरै रगत जम्मा भएको पायौ । पिसाबको जाच र भिडियो एक्सरे रिपोर्ट मिलाउदा उहा गर्भवती हुनु हुदो रहेछ ।
साधारणतया गर्भ पाठेघरमा रहन्छ, तर उनको गर्भ पाठ्घरको बाहिरी भागको दाहिने डिम्ब बाहिनीनलीमा बसेको थियो । गर्भ बढ्दै जाने क्रममा त्यो फुटेर पेट भित्र रगत जमेको बग्ने क्रम जारी रहेछ । जबसम्म रगत बग्ने नशा पत्ता लगाई बन्द गरिदैन तबसम्म रगत बगी रहन्छ र रगतको कमीले महिलाको ज्यान जान सक्छ । उनको शरिमा रगतको मात्र एकदमै कम थियो । धनगढी अथवा नेपालगन्ज रिफर गर्न कम्तिमा १० घण्टा लाग्ने भएकोले उहालाई बचाउन त्यति धेरै समय नभएका कारण परिवारको सल्लाहमा यहिँ सल्यक्रिया गरी बचाउन सफल भयौँ ।
उहालाई गर्नु पर्ने खालको सर्जरी अछाम जिल्लामा धेरै कम भएको छ । यस्तो सल्यक्रिया अछाममा बयालपाटा अस्पतालमा मात्र भएको छ । हामीले सर्जरीको बारेमा सबै जानकारी दियौ तर समस्या रगतदिने दाताहरु भेटिनमा लाग्यो । अस्पतालको कर्मचारी र सामाजिक संजालको प्रयोग गरी सहयोगको लागिअपिल गर्यौँ । धेरै मानिसको सहयोगमा रगतजम्मा भएपछि राति अबेर सल्यक्रियाको सबै तयारी भयो ।
सल्यक्रियाको लागि बरिष्ठ एनेश्थेसिया महेन्द्र कुँवरले उहालाई बेहोस बनाउनु भयो । खासमा यस्तो सल्यक्रिया सुबिधा सम्पन्न ठुलो अस्पतालमा गर्नु राम्रो र सुरक्षित हुन्छ । स्टाफ नर्स बिनाचौधरी सिस्टरले स्क्रबगर्नु भयो अनि मैले बिरामीको सल्यक्रियागर्न पट्टि लागे । उहाको पेटभित्र करिब दुई लिटर रगतजमेको रहेछ । सो रगत सबै हामीले निकाल्यौ, दाहिने डिम्ब बाहिनीनलीमा बसेको गर्भ निकालेर फाल्नु पर्ने थियो र उनको पेट सफागर्नुपर्ने । फुटेको नशाबाध्यौ अनिदाहिने डिम्ब बाहिनीनली निकाल्यौ । साथै हामीले दाताबाट जम्मा गरेको रगत पनि उनलाई दियौँ । सफलतापूर्बक सर्जरी सकेर उहालाई वार्डमा सार्यौ, सल्यक्रिया कक्षमा लक्ष्मी बिकजीले राम्रो सहयोगीको भूमिका निभाउनु भएको थियो ।
उहालाई १ पोका रगत चढाए पछि राम्रो हुनथाल्यो । उंहाअहिले अस्पतालमा थप रगतदिने दाताको पर्खाइमाहुनु हुन्छ । जटिल सल्यक्रिया गर्दा सबैको साथले उँहाको स्वास्थ्य छिटो राम्रो हुदै जानेछ भन्ने आशा गरेको छु । सहयोगी मन र हातहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ ।
एकजना बिरामीको सफल सल्यक्रियामा आधारित यो लेख बयालपाटा अस्पतालका स्वास्थ्य सेवा निर्देशक डा. गौचनले लेख्नु भएको हो।
अछाम – मौसम पुर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल भारतको मध्य प्रदेशको पूर्वी भुभागमा न्युन चापीय क्षेत्र रहेको छ। अहिले देशभर सामान्य
एजेन्सी – अंग्रेजीमा एउटा प्रशिद्ध भनाई छ, ‘अर्ली टु बेड एन्ड अर्ली टु राइज, मेक अ मेन हेल्दी, वेल्दी एन्ड